Sarah Van de Ruit wins slot in Face of Zimbabwe – Shout-Africa : Shout-Africa
Home » Bottom Story » Sarah Van de Ruit wins slot in Face of Zimbabwe
Sarah Van de Ruit
The Harare born beauty’s success follows last month’s crowning of Miss April, Cyprus based siren Lethukuthula Sibanda, a close relation of the iconic Miss Universe-Zimbabwe 1996, Langa Sibanda.
The popular beauty received the highest public votes and the highest nominations from an experienced panel of Face of Zimbabwe judges. SA based model and actor, Melgin Tafirenyika who sits on the panel described Sarah as a “stunning beauty, a photographer’s dream and a strong contender for the Face of Zimbabwe 2013 crown”.
Another judge, UK based model Carol Kumbukani commended Sarah for her passionate display of love for her motherland and desire to represent the country in the competition. She added “Face of Zimbabwe is about finding the face that represents our beauty and diversity and Sarah captures the spirit of the competition”.
Cynthia Qongo who finished as a runner up
Face of Zimbabwe, which launched last year, has gained widespread international acclaim as a professionally run pageant in which the winners become active tourism and charity ambassadors in the community. The pageant recently signed a deal with G Telecoms, a leading supplier of mobile phone and accessories as the competition’s Headline sponsor for 2012.
The Gtel – Face of Zimbabwe finals have been scheduled for the 15th of December at HICC in Harare. According to Mike Tashaya, the Face of Zimbabwe Marketing Director, some of the prizes for the winners will include “a university scholarship grant, a car and over $3000 cash for the winner among other prizes”.